Shikshalaya | मेरो दिनचर्या
By Admin April 28, 2020 804 1
कसले सोचेको थियो, कोरोना, उर्फ कोभिड–१९ ले संसारलाई यति नराम्ररी हल्लाइ दिन्छ भनेर ?कसले सोचेको थियो, महिनौं सम्मघर भित्रैे बन्दी बनेर बस्नु पर्नेछ भनेर ? जे भयो, सबै कुरा अचानक भइदियो । विद्यालय, विश्वविद्यालय बन्द भए । दैनिक हजार भन्दाबढि विद्यार्थीहरुसँग हाँस खेल गर्ने बानी परेको मलाई भने के नपुगे के नपुगे जस्तो भइरहेको छ । मलाई विद्यार्थीहरुको न्यास्रो लागिरहेको छ ।
लकडाउनको पहिलो हप्ता सामाजिक संजाल निकै कमेडीमय बन्यो । एकाध ठट्टामा म पनि मज्जाले सहभागी बनें । मलाई थाहा थियो, जीवन ठट्टामा मात्र चल्दैन । कोविड–१९ ठट्टाको बिषय पनि होइन । जानिएन भने यसले सबैलाई ध्वस्त बनाउँछ । कोरोनाले नलडाए पनि लकडाउनपछि बिकास हुने घटनाक्रमले धेरैको अस्तित्वलाई सखाप पार्न सक्छ । त्यसैले विश्व परिस्थिति र यसले पार्न सक्ने प्रभाव, नेपाली परिवेशमा भावी चुनौतीलाई कसरी सामाना गर्ने होला भनी हरेक पल चनाखो बनेर बस्नुपर्ने ठानेर आफूले भ्याएसम्म अध्ययन गरिरहेको छु ।
यो समयमा सामान्य किसिमको स्वास्थ्य समस्याले पनि ठूलो रुप लिन सक्छ । त्यसमा शारिरीक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य दुवै पर्दछन् । त्यसैले हरेक दिन बिहान करीब एक घण्टा योग, ध्यान र व्यायाम गर्नु मेरो दिनचर्या बनेको छ । मनलाई पीर र चिन्ताबाट टाढा राखि राख्न विभिन्न प्रकारका सकारात्मक प्रवचनहरु सुन्ने गर्दछु । स्वास्थ्यमा खानेकुराको मुख्यभूमिका रहन्छ । तसर्थ, हरेक दिन म शरीरलाई चाहिने पौष्टिक तत्वहरुको लेखाजोखा गर्दै क्यालोरी मिलाएर खाने गर्दछु ।
मेरो जीवनको लागि पनि यो खराब परिस्थिति नै हो । मानव जगतलाई नै सखाप पार्न तम्सेको यो महाव्याधिलाई विश्वकै वादशाहहरुले थेग्न नसकेको बेला तपाईं हामीले रोक्न सक्ने त हुँदै होइन । तर पनि यस्ता कुरा सम्झेर रोइरहनु पनि भएन । यति कुरा भने ग्यारेण्टी छ, जतिसुकै अप्ठेरा दिन किन नहोस्, त्यो दिन सँधै रहँनै सक्दैन । त्यतिञ्जेलसम्म घरमै बसी आफूले आफैलाई बचाउने हो ।
खराब परिस्थितिमा धेरैले आफैलाई तोड्छन्, तर थोरै मान्छे यस्ता हुन्छन्, उनीहरु चुनौतीको पहाडसँग डटेर सामना गर्छन् र दुनियाँले कायम गरेका सबै रेकर्डहरु तोड्न सफल हुन्छन् । कोरोना भाइरसको आक्रमणले आज संसार धरासायी बनिरहेको बेला केही फरक सोच भएकाहरु दुनियाँले बनाएको रेकर्ड तोडिरहेका छन् जस्तै, अमेजन, डिज्ने, नेटफ्लिक्स, अलिबाबा, जुम अनलाइन पोर्टल आदि ।
लकडाउन सुरु भएका केही दिन अलिअलि अल्मलिए जस्तो भए पनि पछि मैले सम्भावनाहरु खोजें । पहिले कामको दौरानमा मुसाको जस्तो जीवन थियो, जतिखेर पनि दौडधुप, कहिल्यै फुर्सद नपाउने । कामको चटारोले यति धेरै च्याप्थ्यो कि, आफ्नो मनको कुरा कहिल्यै सुन्न पाउन्नथें । तर यी दिनहरुमा त्यसका लागि मनग्य समय पाएको छु । मन परेको पुस्तक पढ्न पाएको छु । उमेरले हो या परिस्थितिले हो थाहा भएन, यी दिनहरुमा मैले आध्यत्मिकधारका पुस्तकहरु बढि पढें जसमा हिन्दु दर्शन, बौद्ध दर्शन, आध्यात्मिक गुरुहरुका जीवनी, प्रवचन संग्रह आदि । त्यसका अलावा मैले सकारात्मक सोच र सफलताका कथाहरु, शैक्षिक प्रणाली, शिक्षण विधि आदिसँग सम्बन्धित पुस्तकहरु पढ्न भ्याएँ ।
माथि नै चर्चा गरिसकें योग, ध्यान, शारिरीक व्यायाम त दैनिकी नै हो । मनका कुरा लेख्ने फुर्सद पाउँदिनथेँ, अहिले पाएको छु । लोकसम्वाद अनलाईन पत्रिकामार्फत् हरेक हप्ता सोमबारका दिन मेरो लेख प्रकाशित भइरहेको छ । शिक्षालय अनलाइन पत्रिकामार्फत् मेरा यी कुराहरु सुनाइरहेको छु । मनमा लागेका कुराहरुलाई जानीनजानी आफैले भिडियो बनाएर युट्युब र फेसबुकमार्फत् शेयर गर्न पाएको छु । घरको भान्छा, फूलबारीको रेखदेख गर्ने समय पाएको छु । परिवारसँगै बस्न पाएको छु । देश विदेशमा रहेका साथीहरुसँग अनलाइनमै भए पनि भेटघाट, बैठक, सेमिनार आदि चलिहेको छ ।
लकडाउनपछि के कस्तो परिस्थिति आउला र स्कूलको बाटो कतातिर जान्छ होला भनेर विश्लेषण गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सीपको विकास गर्नुका साथै पूर्वाधार निर्माणको खाका तयार गरिरहेको छु । मैले २०४५ सालको एकवर्षे भारतीय नाकाबन्दीको सामना गरेको छु । त्यही सालको भूकम्प र २०४६ सालको जन–आन्दोलनलाई नजिकबाट भोगेको छु । दशवर्षे जनयुद्धको पीडा, २०६२÷०६३को दोश्रो जनआन्दोलनदेखि राजतन्त्रको अन्त्यको साक्षी बन्न पाएको छु । २०७२ सालको महा–भूकम्प, त्यही सालको ६ महिना लामो भारतीय नाकाबन्दीलाई पनि भोगेको छु । आज कोरोना महामारीको चपेटाको प्रत्यक्षदर्शी बनेर बसेको छु ।
हरेक खराब दिनहरुले उज्वल भविष्यलाई सँगसँगै लिएर आउँछ भन्छन् । म पनि निकट भविष्यको सुनौलो दिनको लागि आफूलाई तयार पारिरहेको छु । साँच्चै भन्नु पर्दा मलाई दिउँसो सुत्ने फुर्सद् छैन । अरु दिनमा भन्दा कम समय फेसबुक चलाउँछु । टिभी नहेरेको र दैनिक पत्रिका किनेर नपढेको त ५ वर्ष नाघिसक्यो । लकडाउनको एक महिना अवधिमा युट्युबमा ५ वटा चलचित्रहरु हेरें ओस्कार विजेता हलिउडको चलचित्र “१९१७”, चारवटा विधामा ओस्कार पुरस्कार जितेको कोरियन चलचित्र “प्यारासाइट”, विश्व बस्नेत निर्मित नेपाली शैक्षिक चलचित्र “स्कूल” र २ वटा हिन्दी शैक्षिक चलचित्रहरु “चक एण्ड डस्टर” र “रफ बुक”।
दुनियाँ भर्चुअल समाज निर्माणमा व्यस्त छ । हरेक कुराको अनलाइन चर्चा छ । म पनि त्यसमा अभ्यस्त बन्न खोज्दै छु । स्कूलको शिक्षण सिकाइलाई अनलाइन प्रविधिमा रुपान्तरित गर्नमा व्यस्त छु ।
(महर्जन, माउण्ट भ्यू इृ.बो. स्कुलका संस्थापक प्रिन्सिपल, क्वेष्ट नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष तथा केन्द्रीय प्याब्सनका प्राज्ञिक सल्लाहकार हुन् ।)
oghfrdhyqb November 10, 2020